युरो फाइनल : सम्पूर्ण जानकारी | Hamro Khelkud
युरो फाइनल : सम्पूर्ण जानकारी
एजेन्सी – युरो २०२० को रोमाञ्चकता जारी छ । नकआउट चरणमा पुग्दा केहि अप्रत्यासित नतिजा निस्केका थिए । विश्व कप विजेता फ्रान्स र युरो च्याम्प्यिन पोर्चुगल अन्तिम १६ बाट नै घर फर्किए ।
त्यसका वावजुद इंग्ल्यान्ड, स्पेन, इटाली जस्ता टोली अझै प्रतियोगितामा छन् । अघिल्लो चरणमा जस्तै सेमिफाइनल पनि रोमाञ्चक हुने आशा गरिएको छ । पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेन र इटाली तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्ड र डेनमार्कबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
कहिले हुन्छ फाइनल ?
युरो २०२० को फाइनल आइतबार नेपाली समय अनुसार मध्यरातको १२:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
फाइनलमा को को खेल्छन् ?
इटाली र स्पेनमध्ये एक तथा इंग्ल्यान्ड र डेनमार्कमध्ये एक टोलीले फाइनल खेल्नेछन् । सेमिफाइनल मंगलबार र बुधबार हुनेछ । दुवै खेल मध्यरातको १२:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
कहाँ हुने छ फाइनल ?
लन्डनस्थित वेम्ब्ली रंगशालामा फाइनल खेल हुनेछ । इंग्ल्यान्डको घरेलु मैदानको क्षमता ९० हजार रहेको छ । सोही मैदानमा दुवै सेमिफाइनल पनि हुनेछ । सन् १९९६ को युरो कप फाइनल पनि सोही मैदानमा भएको थियो । चेक गणतन्त्रलाई २–१ ले हराउँदै जर्मनीले उपाधि जितेको थियो ।
कति दर्शकले रंगशालामा पुगेर फाइनल हेर्न सक्छन् ?
युरो कपको फाइनल यसपटक ६० हजार भन्दा बढी दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन् । जुन २२ मा बेलायत सकारले रंगशालाको क्षमताको ७५ प्रतिशत दर्शक राख्न सकिने निर्णय गरेको थियो । दुई सेमिफाइनलमा पनि ६० हजार भन्दा बढी दर्शकले हेर्न पाउनेछन् ।
तर, त्यसका लागि दर्शकहरुले केहि मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ । कोभिड १९ को रिपोर्ट नेभेटिभ भएका, खेल हुनु १४ दिन अघि खोप लिइसकेकाले मात्र रंगशाला पुगेर खेल हेर्न सक्नेछन् ।
युइएफएका अध्यक्ष एलेजेन्डर काफ्रिनले बेलायत सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै भनेका छन्, यो सुखद खबर हो । अब धेरै दर्शकले वेम्ब्ली पुगेर अन्तिम ३ वटा खेल हेर्न पाउनेछन् । पछिल्लो १८ महिना मैदान भित्र वा बाहिर सबैका लागि कठिन रह्यो । दर्शकको उपस्थितिले खेलको रोकन बढाउनेछ । यो प्रतियोगितासँगै विस्तारै अवस्था सामान्य हुँदै गएको सन्देश जानेछ ।